Nongedzo Yakakwana Yekushandisa LinkedIn Kutengesa Navigator | Martech Zone
LinkedIn yakashandura nzira iyo mabhizinesi anobatana nayo. Ita zvakanakisa kubva papuratifomu iyi uchishandisa iyo yekushandisa Navigator chishandiso.
Mabhizinesi nhasi, zvisinei nekuti makuru kana madiki, vanovimba neLinkedIn yekuhaya vanhu pasirese. Nevanopfuura mamirioni mazana manomwe evashandisi, chikuva ichi chiri kukura zuva rega rega muhukuru uye kukosha. Kunze kwekutora, LinkedIn ikozvino ndiyo inonyanya kukoshesa vatengesi vanoshuvira kusimudzira yavo yekushambadzira yemadhijitari. Kutanga nekugadzira kubatana kune inogadzira inotungamira uye nekugadzira zvirinani brand kukosha, vatengesi vanofunga LinkedIn yekuwedzera mutengo kune yavo yakazara Marketing nzira.
LinkedIn YeB2B Kushambadzira
Pakati pezvimwe zvinhu, LinkedIn yakave nekukanganisa kushambadzira kweB2B. Nemabhizimusi angangoita mazana manomwe emamiriyoni kubva kuma700+ nyika aripo papuratifomu, ikozvino chishandiso chakakosha zvinoshamisa kumabhizinesi eB200B. Chidzidzo chinoratidza izvo 94% yeB2B vatengesi shandisa LinkedIn kugovera zvinyorwa zvavo. B2B kambani kambani uye maCEO vari kuyedza kuve LinkedIn vanokurudzira nekuvaka yavo yega-mhando ine zvinyorwa zvekutaura kuti zviwedzere kusvika kwehupenyu, kuvandudza chiziviso cherudzi, uye semhedzisiro, kuwedzera kutengesa.
Vamiriri vevatengesi havasi kumashure, ivo vari kuvaka zvekutengesa fannels paLinkedIn izvo pakupedzisira zvinotungamira kune yakakwira yekutengesa chizvarwa. Sales Navigator, chishandiso neLinkedIn chakagadzirirwa kutora maitiro aya padanho rinotevera. LinkedIn Sales Navigator yakaita senge yakasarudzika vhezheni yeLinkedIn pachayo. Ipo LinkedIn yatove inoshanda kushambadziro yemagariro, Sales Navigator inopa akawanda maficha anozokutendera iwe kuti utore tarisiro kunyange nekukurumidza mune yako niche.
Pasina imwezve ado, heino yakakurumidza gwara yekukubatsira iwe kuti utange neichi chishandiso.
Chii chinonzi LinkedIn Sales Navigator?
LinkedIn Sales Navigator chishandiso chekutengesa pasocial icho chinoita kuti zvive nyore kwauri kuti uwane mikana yakakodzera yebhizinesi rako. Izvo zvinoita saizvozvo nekupa zvakadzama kusefa sarudzo zvinoenderana nemushandisi ruzivo izvo zvinokutendera iwe kumhanyisa yekumberi kwekutsvaga kutsvaga chaiko tarisiro yaunoda.
Uchishandisa Sales Navigator, vamiririri vekutengesa vanotsvaga kuburikidza nekiyi inotungamira, tarisa zvavanoita, uye vatarise zvakafanana shamwari dzavanogona kusvika kwadziri. Izvi zvinovagonesa kuve nhanho kumberi mumutambo wavo nekuvaka mapaipi anoshanda kuti vagadzire zvirinani kutengesa.
Mazuva ano kutengesa kunoshanda (uye tinochida). Vashandisi veVatengesi veNavigator vanowana kusimudzwa kwe + 7% muohwina rate kubva kuzvinhu zvemazuva ano zvekutengesa.
Sakshi Mehta, Senior Chigadzirwa Kushambadzira Manager, LinkedIn
Usati wanyura mukushandisa, ngatitarisei kuti kana Sales Navigator yakanyatsogadzirirwa iwe.
Ndiani Waunofanirwa Kushandisa LinkedIn Sales Navigator?
LinkedIn Sales Navigator ndizvo chaizvo zvaunoda kana uri mutengesi weB2B.
Sales Navigator chigadzirwa chakabhadharwa chinowanikwa kune wese munhu paLinkedIn. Kunyorera kunogona kusiyana. Iwe unogona kusarudza yemunhu, timu, kana bhizinesi kunyorera modhi zvinoenderana nezvido zvako uye saizi yekambani yako.
LinkedIn Sales Navigator inotibvumidza kuti tiwane varidzi vebhizinesi musangano uye tiende kwavari vasati vatarisa zvigadzirwa zvitanhatu zvakasiyana kuti vaone matambudziko avo zvakasiyana uye pakupedzisira vanzwisise kuti pane mhinduro imwe chaiyo.
Ed McQuiston, VP Global Kutengesa, Hyland Software
Ziva kuti Hyland, Akamai Technologies, uye Guardian vakashandisa sei LinkedIn Sales Navigator pakutengesa vanhu.
Mashandisiro Ekushandisa LinkedIn Kutengesa Navigator
Kutanga kubva kune zvekutanga zveKutengesa Navigator kushandisa zvakanyanya kubva pachishandiswa ichi mu2020, isu takufukidza kubva kune ese maficha. Heano maitiro aunotanga kubva pakutanga.
1. Tanga Yako Yemahara Muedzo
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kuenda kune iyo Yekutengesa Navigator peji uye chengeta pa Tanga Yako Yemahara Muedzo sarudzo. LinkedIn inoita kuti iwe ushandise Sales Navigator mahara kwemazuva makumi matatu. Saka, ita shuwa kuti iwe unotora mukana wakazara weizvozvo mumwedzi wako wekutanga.
Iwe unozofanirwa kupa yako kiredhiti kadhi ruzivo kuti usaine ichi chinopihwa. Pamusoro pezvo, hauzobhadhariswa chero chinhu kana ukabvisa kunyorera kwako nguva yekutongwa isati yapera.
Iwe unozobva waendeswa kune iyo Sales Navigator webhusaiti, uye iri rakasiyana chikuva pacharo. Chero zvaunoita pano hazvizokanganisa yako yakajairwa LinkedIn account.
2. Set Up Account Yako
Kana ukangosaina account, unofanirwa kuseta zvaunofarira zvinoenderana.
Iwe unogona kugadzirisa yako Sales Navigator account kumisikidza zvaunofarira zvakadai semazita emabasa, verticals, uye matunhu aunoda kunongedza.
Pakutanga, iyo Sales Navigator inokupa iwe sarudzo yekuchengetedza yako iripo LinkedIn yekubatanidza semutungamiri. Pamusoro pezvo, unogona zvakare kuyananisa Sales Navigator ne Salesforce kana Microsoft Dynamics 365 kupinza vese vaunosangana navo nemaakaundi. Kune zvakare zvimwe zvakawanda sarudzo kune sanganisa LinkedIn nemamwe maapplication kana iwe uri kushandisa mamwe maCRM.
Panguva ino, wapedza nechikamu chekutanga chekumisikidza account yako. Iwe unogona ikozvino kuona nekuchengetedza makambani Ekutengesa Navigator inoratidza. Kuchengetedza kambani muaccount yako kunokutendera kuti uteedzere zvigadziriso, kuteedzera matsva matsva, uye kugamuchira nhau dzakananga dzekambani.
Izvi zvinokuchengetedza iwe mushe mushe musati matanga kutaurirana nemunhu anogona mutengi. Nekudaro, kana usati uine chokwadi chekuti ndeapi makambani ekuchengetedza, unogona kusvetuka chikamu ichi wovawedzera gare gare.
Chekupedzisira, iwe unofanirwa kuzadza ruzivo rwekuti ndedzipi mhando dzevatungamiriri dzauri kutsvaga. Kune izvi, iwe unogona kuisa ruzivo nezve yako nzvimbo yekutengesa, indasitiri-zvido, uye basa mabasa iwe auri kunanga.
3. Tsvaga Kutungamira Uye Tarisiro
Chinhu chinotevera iwe chaunofanirwa kuita kana iwe uchinge wapedza neyako account zvido kutsvaga kutsvaga tarisiro uye kuvaka lead lead. Nzira yakapusa yekuita izvi kushandisa Kutungamira Kuvaka - chishandiso mukati mekutengesa Navigator iyo inopa mafirita ekutsvaga epamberi. Kune chero munhu anoshandisa Sales Navigator, kuziva mashandisiro Ekutungamira Muvaki idanho rakakosha.
Kuti unatsiridze yako yekutsvaga maitiro, unogona kutsvaga chaiwo mazita emabasa kana makambani. Paunenge wapedza kumisikidza yako yekutsvaga parameter, tinya pane Yekutsvaga sarudzo kuti uone mhedzisiro. Sales Navigator inokupa iwe yakawanda data mumhedzisiro yayo kupfuura iwe yaunowana mune yakajairwa vhezheni yeLinkedIn.
Padivi peese mhedzisiro, iwe unowana iyo Sevha seMutungamiri sarudzo. Unogona kushandisa izvi kuponesa akakodzera tarisiro. Tarisa tarisiro yako nehungwaru pachinzvimbo chekusarudza vanhu vasina kurongeka kubva pabheti.
Nhanho inotevera ndeyekuchengetedza inotungamira kuaccount. Pano, maakaunzi tarisa kumakambani iwe aunoda kutevera kuti afambirane nezvazvino kuitika.
Kurutivi rworuboshwe rwe peji iwe unowana akati wandei ekusefa sarudzo, kusanganisira maindasitiri, kudomwa, rekutanga uye rekupedzisira zita, kodhi yepositi, saizi yekambani, huwandu hwevakuru, uye makore echiitiko.
Pamusoro pezvo, Sales Navigator inopawo ficha inonzi TeamLink. Iwe unogona kushandisa TeamLink kusefa mhedzisiro yako kuti uone bridged kana timu kubatana. Kana TeamLink ikacherekedza hukama hwepamoyo pakati pechaunotarisira uye nenhengo yechikwata, unogona kukumbira kubatana kwako kwekutanga. Chekupedzisira, mushure mekunge wawedzera tarisiro sekutungamira, iwe unozogona kuzviona paMutungamiri tebhu.
4. Sefa Kutengesa Zvaunoda
Pane iyo peji rezvisarudzo zve yako Sales Navigator mbiri, iwe uchaona Zvekutsvaga Zvekutengesa pakati. Kubva pano, unogona kudzikisira yako yakanakira vatengi rondedzero inoenderana neindasitiri, jogirafi, basa, uye saizi yekambani.
Izvi zvido zvichaonekwa pese paunotarisa chimiro chetarisiro. Uye LinkedIn ichakuratidzawo iwe kutungamira kurudziro zvichibva pane zvaunofarira zvaunoseta.
Ichi ndicho chinonyanya kushanda chekutarisa pane yekutengesa Navigator. Iwe unogona zvakare kumhanyisa yekumberi yekutsvaga pane chero anotungamira kana maakaunzi. Kune zvinopfuura makumi maviri mafirita ekutsvaga aunogona kushandisa pakutsvaga kwako. Izvi zvinosanganisira mazwi makuru, zita, makambani emakambani uye nezvimwe zvakawanda.
5. Tarisa Kumusoro PaKo Kutungamira Kwaunotungamira
Pane peji rekutanga reSales Navigator, iwe unogona kuteedzera zvese zvichangobva kugadziridzwa uye nhau dzinoenderana neyako yakachengetedzwa inotungamira. Chinhu chakanaka nezve Sales Navigator ndechekuti iwe unogona kuona inogadzirisirwa kunyangwe kubva kune vanhu vasiri mahukama ako. Nezvese izvi zviono pane yako tarisiro, unogona kunyora zvirinani InMail mameseji (akananga mameseji) kuti uzviite.
Zvakare, kana iwe uchida kudzikisira iyo nhandare yezvakagadziridzwa, shandisa iwo mafirita kurudyi rwepeji. MuAccounts tab, iwe unozogona kuona runyorwa rwemakambani awakachengeta. Kuti uzive zvakawanda nezve kambani, tinya pane Yekutarisa Akaunti sarudzo. Ikoko, iwe unogona kuwana pamwe nekuwedzera vamwe vanhu uye uwane ruzivo rwechazvino nezve makambani avo.
Uyezve, unogona kudzvanya pane 'Vashandi Vese' sarudzo kuti uone wese anoshandira iyo kambani. Ichi chinhu chinoyevedza chinoyemurika nekuti chinoita kuti iwe ubatanidze kune chero munhu ari mukambani chero nguva.
6. Vaka Vakafambidzana
Panguva ino, iwe waona yako tarisiro uye ukanyatso kuteedzera zvavakaita. Zvino, unovabata sei?
Maitiro akanakisa aunogona kutora ekuramba uchikurukura nemaakaunzi ako akakosha ndekuvatumira iwo akakodzera uye akakodzera mameseji. Nerubatsiro rweSales Navigator, unogona kukwira-kune-zuva nezvako zvemutengi zveLinkedIn zviitiko.
Iwe unogona kuziva nguva yekuti usvike uye uvatumire maInMails. Mhizha mameseji uye gadzira template munzira inokoka hurukuro inovaka. Uye ndiwo chaiwo mhando yehukama-yekuvaka zano iyo inovhura nzira yako kuenda kunharaunda kutengesa kubudirira.
Nekudaro, LinkedIn Sales Navigator ine imwechete diki yakashata. Iwe unofanirwa kusvika kune yega yega imwe yeako anotungamira nemaoko. Izvi zvinogona kunyanya kutora nguva.
Imwe nzira yekudzivirira iri basa rekubhadharisa kuita yako mameseji maitiro. Iwe unogona kuzviita izvo chete nerubatsiro rweLinkedIn otomatiki chishandiso.
Ziva kuti handi ese matomati maturusi akachengeteka. Kana iwe uchida chengetedzo uye hunyanzvi hwakavimbiswa, zviri nani iwe sarudza Expandi kune yako yemagariro kutengesa otomatiki maitiro. Expandi inosimbisa kuchengetedzeka kweakaundi yako nekushandisa yakavakirwa-mukati chengetedzo muganho wekutevera-uye kukumbira kwekubatanidza, kutumira mameseji mukati meakarongwa maawa ekushanda, uye kubvisa zvakaunganidzwa zvichakamirira zvinokoka nekungodzvanya kamwe chete.
Isu tinoziva kuti kutengesa munharaunda uye kutsvaga zvinogona kuva zvinorema zvikuru kana ukasatora zvishandiso zvakanaka kana zviwanikwa zvakanaka. Uchishandisa chikuva senge LinkedIn Sales Navigator inoita kuti iwe ugadzire yakakura tarisiro runyorwa nekukurumidza pamwe nekuita kushoma. Iwe unogona ipapo kutora iro runyorwa uye kuendesa kunze muExpandi, izvo zvinokuitira yakawanda yemabasa ako anotora nguva kwauri.
7. Shingairira Insights Kubva Kutengesa Navigator
Pane zvinoverengeka maficha muKutengesa Navigator iwe yaunogona kushandisa zvakanyanya kana iwe uchiziva kuishandisa nemazvo. Semuenzaniso, kana iwe uchida mamwe matsva anotungamira, Sales Navigator inogona kukurudzira kutungamira kunoenderana nerwako ruzivo ruzivo uye mashandisiro.
Zvekare, kana iwe uine anovimbisa asi epamusoro-ekuchengetedza lead, Sales Navigator inokutendera iwe kuti upe manotsi uye ma tag kune mutengi chimiro. Iyo zvakare inowirirana neCRM yako.
Zvakare, kana iwe uchifarira inbound LinkedIn kushambadzira, Sales Navigator inokupa iwe kuwedzerwa kuoneka. Nekudaro, iwe unogona kuona kuti ndiani achangobva kuona chimiro chako. Nenzira iyoyo, iwe unogona kuziva kuti ndiani atove kufarira iwe nesangano rako.
8. Govera Tarisiro Kukosha
Pa LinkedIn, tarisiro vanozadza iyo Nharaunda chikamu cheprofile yavo chiri kunyatso kukuitira iwe chikuru kufarira. Pamusoro peichi chikonzero, ivo vari kukupa iwe izere runyorwa rwemisoro iwe yaunogona kushandisa se:
Ground yekukurukurirana kuti unzwisise hunhu hwavo uye zvavanokoshesa zvirinani
Mepu yemugwagwa kuti kambani yako nezvigadzirwa zvayo zvinosangana sei nezvavanoda
Kusvika pakuziva izvo zvaunotungamira zvinofarira uye nekunzwisisa kuti zvigadzirwa zvako zvinogona sei kuvapa iwo kukosha kwavanotsvaga inzira yakajeka. Izvo zvinokupa iwe rakakura ruoko rwepamusoro pamusoro pevanokwikwidza vasina hanya zvakakwana kuti vagadzirise maitiro avo kune avo anotungamira.
9. Wedzera Kutengesa Navigator Kuwedzeredzwa kuChannel
Icho chidobi chiri nyore chinokuponesa iwe yakawanda nguva nesimba. Sales Navigator's Chrome yekuwedzera inoita kuti iwe uone LinkedIn profiles kubva mukati meakaundi account yako. Pamusoro pezvo, uku kuwedzera kunogona zvakare kukutungamira nemusoro wenyaya yechando, chengetedza zvinokutungamira, uye nekukutaridza data reTimuLink.
Kana iwe ukaverenga kusvika pano, panogona kunge paine mubvunzo mumwe iwe waungade kubvunza:
Is LinkedIn Sales Navigator yakakosha mari yako here?
Kuti upindure muchidimbu, hongu, ndizvo. Nepo mabhizimusi madiki nemasangano ekutengesa achifanirwa kutanga kuyedza yemahara vhezheni kuti aone kana zvakakodzera kuisa mari panguva ino, mabhizimusi akakura anofanirwa kunyatso shandisa chikuva ichi kune zvirinani zvekutengesa mapaipi uye nekushanda kwakanaka kwekufambisa.
LinkedIn Kutengesa Navigator Demo Expandi LinkedIn Automation
Tags: b2bb2b kushambadziraexpanditsvaga zvinotungamiratsvaga inotungamira uye tarisirotsvaga inotungamira onlinetsvaga tarisiroLinkedInlinkedin sales navigatormicrosoft dynamics 365mutengesi wekutengesasalesforce